01 / 06 / 2015 | RayHaber | raillynews
Maalinta: Juun 1, 2015
Hooyooyinka tartanka Palandök
Aabayaashu waxay ku tartameen Palandöken: 'aabeyaasha orodka barafka' ayaa lagu qabtay Xarunta Palandöken Ski Center iyada oo la raacayo qaab dhismeedka xuska maalinta aabaha aroortii ugu dambeysay ee May. Iyada oo jawigu kululaanayo, kiiloomitir 6 kiiloomitir badhtamaha magaalada ah [More ...]
34 inta u dhaxaysa Waddooyinka Tareenka Iran iyo TCDD. Kulan la qabtay: 26-27 inta udhaxaysa Iran (RAI) Railways iyo TCDD 2015 intii u dhaxeysay May iyo 34. Shirka ayaa lagu qabtay Tabriz. Agaasinka Guud ee TCDD iyo RAI General [More ...]
Gaadiidka Gawaarida ee TANAP Waxaa Bilaabey Tareenka: Marxaladi hore, gaadiid qaada TANAP waxay ka bilaabeen Iskenderun ilaa saldhigyada Yerkoy iyo Yapi oo leh tareen. In Kars on 17 March 2015 Turkey, Azerbaijan iyo Georgia Madaxweynayaasha [More ...]
Mashruuca xawaaraha xawaaraha sare ee Samsun-Ankara ee ajendaha dawladda: AK Party Murashax Kuxigeenka Murashax Xasan Basri Kurt, mashruuca tareenka xawaaraha xawaaraha sare ee Samsun-Ankara ayaa ku jira ajandaha xukuumadda, ayuu yidhi. AK Party Samsun Musharax kuxigeenka Hasan Basri Kurt, [More ...]
Ku faraxsanaanta Yht ee Bilecik
Ku riyaaqaya Bilecik Yht: Bilecik, Tareenka Xawaaraha Sare (YHT) ujeedkan, adeegyada cusub ee khadka minibus ee laga bilaabay aagga idaacadda ayaa maanta bilaabmay. [More ...]
Qarax gaas oo dabiici ah oo ka dhacay dhismaha tareenka Alibeykoy
Gaaska dabiiciga ah ee Calibeyköy metro dhismaha: Intii lagu guda jiray dhismaha khadka tareenka ee magaalada Alibeyköy, dhuumaha gaaska dabiiciga ayaa qarxay. Dhismooyinka ku hareereysan waa la daadgureeyay. Qarax gaas dabiici ah ayaa ka dhacay Dhismaha Wadada Tareenka ee Magaalada Istanbul Alibeyköy. Markii dhismayaasha ku xeeran laga daadgureeyo. [More ...]
Samsun -Sarp ayaa u sheegay tareenka
Samsun -Sarp ayaa u sheegay jidka tareenka: MHP Trabzon Ku-xigeenka Qaran Koray Aydin, Badda Madadaashu iyo Trabzon ayaa duulaya mashruuca, 'Iron Iron Road', ayuu yidhi. Aydin, Turkey ayaa sheegay in ay dadka dhexgalaan la dunida iyada oo mashruucan, Turkey ee Trabzon. [More ...]
Qiimaha guryaha ee Istanbul ayaa kor u kacay: Qiimaha guryaha ee Istaanbuul waxay wali kusii kordhayaan dariiqyo gaadiid iyo mashaariic caan ah sanadihii ugu dambeeyay. Ilaa iyo inta la dhisayo Buundada Bosphorus, sedex meelood meel dadka reer Istanbul ayaa ku noolaa, [More ...]
Jawaabta metrooga ee ka socota muwaadiniinta aragga Naafada ah: Kooxo aragga aragga ah oo dhibaato ka haysato inay tareennada ku maraan jidka tareenka 'İZMİR Subway' ayaa mudaaharaad ka hor dhigay dawladda hoose ee polzmir. Perona waxaa ilaaliyay ilaalada amniga [More ...]
Qandaraaska Trabzon ee Kocaeli
Qandaraaska loogu talagalay khadka Kocaeli Tram ayaa la soo gabagabeeyey: Qandaraaska tareenka oo ay qabteen Waaxda Gaadiidka ee Dawladda Hoose ee Magaalada Kocaeli ayaa la soo gabagabeeyey. 7,2 km dhererkeeda waxaa hirgaliyay Kocaeli Magaalo Weyn si loo yareeyo isu socodka magaalada. [More ...]
RayHaber 01.06.2015 Warbixinta Shirka
Dayactirka Wadada Iskenderun iyo Dayactirka Jidka Iftiiminta Goobta Wadada Tareenka ee Erzincan Wadada Soo dejinta iyo Birta Xannaanada Samsun Tram Viaduct ayaa loo dhisi doonaa isgoyska tareenka.
Akhisarı Rajada Asphalt Guuritaanka: Manisa Magaalo Weynta Magaalada Akhisar sanado badan, iyo degmadu waxay noqotay dhibic dhiig ah oo daadata dariiqooyinka burburay ayaa dhaqaaq muhiim ah sameeyay. Hawlaha waxay bilaabeen meelo badan isla waqti isku mid ah [More ...]
Asphalt waxay ka shaqeysaa Caasimadda Hatay
Asphalt wuxuu ka shaqeeyaa Dowlada Hoose ee Magaalada Hatay: Dowlada Hoose ee Magaalada Hatay ayaa ku dhawaaqday in wadada xNUMX kilomitir dib loo furay. Asphalting, parquet iyo shaqooyinka qulqulaya ayaa laga bilaabay degmooyinka Kumlu, Hassa, Arsuz, Samandag, Payas, Antakya iyo Dörtyol [More ...]
Karsta xaafadaha iyo jidadka tuulada ma joogi doonaan
Waddooyinka deriska iyo tuulada looma dhaafi doono bilaa-gawaarida iyada oo aan la helin wax la sii wado: Dawladda Hoose ee Kars ee MHP waxay sii wadaa dadaallada aan kala go 'lahayn ee magaalada. Duqa magaalada Kars Murtaza Karaçanta, xitaa wadooyinka tuulooyinka ugu fog iyadoo laga joojinayo muwaadiniinta adeegga [More ...]
Dhismaha Karataş Bridge
Buundada Karataş Waxaa La Dhisayaa: Buundada Karataş, oo la burburiyey intii lagu jiray daadadkii fatahaada ee Oltu Degmada Erzurum, ayaa dib loo dhisayaa. Maareeyaha waaxda Wadooyinka ee Magaaladda Erzurum Cawaale Qeybta Ayhan Karaoglu, Buundada Karatas waa la burburiyey [More ...]
47 Sanduuq Sanadeedka Cusbooneysiinta ah
Buundada 47 ee Sannadlaha ah ee la dayactirayo: Iyadoo Xaafadda Yeşilhisar ay ku taal degmada Hisarcık ee Kütahya Karşıyaka Waxaa lagu dhawaaqay in buundada 47 sanadlaha ah ee isku xirta xaafadaha lagu cusbooneysiin doono gudaha mashruuca "Kanal Hisarcık". Duqa Magaalada Fatih Caliskan, laba xaafadood oo midba midka kale u yahay [More ...]
New Zigana Tunnel noqon doonaa Turkey ee ugu dheer ka dib markii Ovit: Agaasimaha Guud ee Waddooyinka Cahit Turhan, Eastern taariikhda Black isku xira bariga Anatolia wadada Xariir ah, Zigana cusub laga sameeyey oo dhaylo Tunnel iyo tunnel [More ...]
Gaadiidka mulkiilaha ah ee Turkiga ayaa seegay hurdada dadka deggan gobolka
Konak Tunnel ayaa seexday hurdada dadka deggan gobolka: Raiisel wasaare Ahmet Davutoğlu iyo Lataliyaha Madaxaweynaha Binali Yıldırım ka qayb galka ayaa furay Konak Tunnel oo seexday hurdada dadka deggan gobolka. Tunnel-ka ayaa furmay Axadii la soo dhaafay, gaariga oo wata saxan cas [More ...]
Amanos Tunnel Mar labaad
Amanos Tunnel ayaa mar kale ku socda Agenda-ka: Mashruuca 2012, oo ajandaha loo saaray 3, wali horumar ma uusan gaarin sanadka XNUMX ka dib. Kuxigeenka CHP Gaziantep Mehmet Şeker, açıklamak Sharaxaya mashaariicda waalan ee ka socda aagaga doorashada, kadib markay doorashadu dhamaatay [More ...]
Koofiyadaha qumman ee ajendaha
Qolka Köse tunnel wuxuu ku jiraa ajandaha: Agaasimaha guud ee wadooyinka Cahit Turhan, wadada weyn ee Gümüşhane-Köse sanado badan tan iyo mala awaalka shaqooyinka loo balan qaaday inuu bilaaban doono. AK Party Gumushane kuxigeenka Feramuz Üstün, Wasaaradda Gaadiidka [More ...]
Helitaanka xal loo helo Nemrut Harbor Road
Raadinta Xalka Wadada Nemrut Port: AK Party Izmir ku xigeen Xamza Dag, Duqa Magaalada Aliaga Serkan Acar, Gudoomiyaha AK Party Aliaga Yasar Akbulut iyo Wadooyinka Waaweyn 2. Maareeyaha gobolka Abdulkadir Uraloğlu, [More ...]
Shabakada Wadooyinka ee Sincik-Malatya
Shabakada Wadooyinka Wadada Sincik-Malatya Helitaanka: Gudoomiye kuxigeenka kooxda AK Party Ahmet Aydin, shabakada wadada Sincik-Malatya ayaa loo qaadi doonaa wadooyinka, ayuu yidhi. Aydin, doorashadu waxay ka timid baaxadda magaalada Sincik oo warwareegaya tuulo ilaa tuulo dhagaysanaysa dhibaatooyinka muwaadiniinta. [More ...]
Xad gudubka Gumushane: Degmada Gumushane iyo Wadooyinka Waaweyn Karşıyaka Is dhaafsiga xaafada. Duqa magaalada Ercan Çimen, kuxigeenka la socda Kubilay Bozalan, Agaasimaha Sayniska Serkan Öztürk iyo madax sare [More ...]
Wadada Çamlıbel iyo Hisarköy ayaa tagaya maxkamada: Dowlada hoose ee Lapta ayaa shir jaraaid ku qabatay magaalada Hisarköy ee wadooyinka laamiga ah oo lagu burburiyey howlihii wadooyinka ee Çamlıbel iyo Hisarköy. Naadiga Ciyaaraha Lapta ee 11.00 [More ...]
Arhavi Çiftekemer Bridge ayaa iftiiminaya
Buundada Arhavi Çiftekemer ayaa ifisay: 18 degmada Arhavi ee Artvin. Dhismaha buundada 'Çiftekemer Bridge', oo la dhisay qarnigii 16aad, dalxiiska iyo is dhex galka ayaa la soo gabagabeeyey. Xafladda Furitaanka Buundada [More ...]